Isitudiyo esimangalisayo kwi-pearl qatar - I-Airbnb
Isitudiyo esimangalisayo kwi-pearl qatar
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSuleman
Indawo enkulu ye studio kweyona nqaba yobutofotofo ye pearl Qatar le 73 square mt inefenitshala ngokupheleleyo ineembono ezimangalisayo neziphefumlayo zeSide marina, indawo yokuzivocavoca.
Le ndlu ihonjiswe ngokugqitywa kwale mihla kunye nefenitshala ukwenza ukuba ukuhlala kwakho e-Doha kube ntofontofo kwaye ilungele kangangoko kunokwenzeka.
-Ifanitshala ekumgangatho ophezulu, ikhabhathi
-Zonke izixhobo zasekhitshini, i-microwave, i-oveni, umatshini wokuvasa ifriji
-kwisicelo sokucheba, izitya zinikezelwe
-I-wifi ye-intanethi ebanzi
Ibhedi yenkosi (yabantu abadala aba-2)
- Ilinen entsha, ecocekileyo yebhedi kunye neetawuli
-indawo yokupaka yabucala, ukuphakamisa isantya esiphezulu.
kunye neentuthuzelo ezongezelelweyo ezenziwe ukuba uzive njengekhaya kude nekhaya. Iimbono ziyamangalisa, zibekwe ngaphezulu komgangatho we-11! Yonke into isemnyango wakho
Le ndoda yakha isiqithi Qinisekisa ubomi boluntu kunye nokuphumla apho indawo yoluntu kunye nezibonelelo ziphambili.
4.73 out of 5 stars from 239 reviews
4.73 · Izimvo eziyi-239
IParl Qatar inokufikelela okugqwesileyo kumalwandle amahle, i-7 star cenima, i-marinas, ivenkile kwi-madina central.pearl izindlu ezikumgangatho wehlabathi, iivillas kunye namagumbi adityaniswe kumgangatho ophezulu.
Umkhenkethi ovula ibhasi ephezulu ushiya amaxesha ama-4 ukusuka kwiperile eya kukuthatha ukuya e-doha.
Le phakheji ibandakanya ukufikelela okupheleleyo kuzo zonke iindawo zangoku kunye nezixhotyiswe kakuhle ukuba iperile ibonelele, kuquka:
• Iziko lokuthengisa elikufutshane, elineebhanki ezahlukeneyo, iivenkile (ivenkile enkulu, ikhemesti), iikhefi (iCaribou, iCosta, iBerts Cafe, ixesha lekofu), iindawo zokutyela (carluchi Italian , royal tandoor indian, Nandos, Wagamama Megu Japanese restaurant, tabaka Lebanese restaurant) kunye ZONKE ukutya okukhawulezayo
•Indawo yokudlala yabantwana
•Kutshanje kulungiswe Ichibi elikhulu lokuqubha kunye nephuli yabantwana
.iklabhu yokubhowula e-madina central
•umgama wokuhamba wenkundla yethenisi
•Ezixhotyiswe kakhulu iijim ezinkulu ezinezixhobo zamva nje zokujima
•Ukufikelela kwiindlela zokuhamba zabucala kunye neepaki phakathi koluntu
•Amagumbi okutshintsha amadoda/abasetyhini
•Ukufikelela kwindawo yokosa inyama
•Ukhuseleko lweeyure ezingama-24, ulawulo lokungena kunye neCCTV
..........pearl kwivenkile yokutya..........
+974 7712 6171. Unako ukusebenzisa unikezelo app SunCart ngokunjalo.
Kwakhona Ukuhanjiswa kweKhaya Igrosari ye hub iphakathi kwenqaba 3-4
Umbuki zindwendwe ngu- Suleman
Izimvo eziyi-1 576
Kuya kuba luvuyo kum ukuzama ukwabelana nawe ngeminyaka yam yolwazi olubanzi kunye namava e-Doha ngokuzama konke okusemandleni am ukuphendula imibuzo yakho phambi kotyelelo lwakho nangexesha lotyelelo lwakho. Ndiza kuzama konke okusemandleni am ukuba ndikuphendule ngokukhawuleza.
Kuya kuba luvuyo kum ukuzama ukwabelana nawe ngeminyaka yam yolwazi olubanzi kunye namava e-Doha ngokuzama konke okusemandleni am ukuphendula imibuzo yakho phambi kotyelelo lwakho…